Iphepha Cup, Paper Bag, Paper Bucket - JAHOO
Siyakwamukela Ku Iphakethe leJiangxi Jahoo
I-Jiangxi Jahoo Pack Co, Ltd. ingenye yabakhiqizi abahamba phambili eChina, egxile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo yokuphrinta neyokupakisha, kufaka phakathi izinkomishi zephepha, iphakethe lokudla, ibhokisi lephepha lombala, ibhokisi lesipho, isikhwama sephepha, ukuma kwamakhadibhodi ibhokisi, ikhathalogi, imvilophu, njll. Sinikezela ngezinsizakalo zokuma okukodwa kusukela ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekulethweni
Sinemishini eminingi esezingeni eliphakeme, njengemishini emi-2 YEROLAND, imishini enemibala emine, imishini yokuphrinta ye-UV, imishini yokusika okuzenzakalelayo, imishini yamaphepha yokusonga onamandla onke kanye nemishini yokubopha iglu ezenzakalelayo. Inkampani yethu inezinhlelo zokuthembeka nokuphathwa kwekhwalithi, amasistimu ezemvelo nezinhlelo zokulawula izinsimbi ezisindayo.
Sisebenza ngokuzibophezela nangokwethembeka, siqinisekisa njalo ukuthi izinto ezifanele ziyenziwa ukumela inkampani yethu ngobunyoninco
Samukela uchungechunge lwesitshalo sokuhlanzwa ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ihlangabezana nezindinganiso zezeMpilo nezokuphepha.
Kraft alahlwayo Paper Chinese Noodle Box ukudla ...
China Ukwakha eshibhile ngokwezifiso Ilogo Kraft Pape ...
Alaba single ungqimba iphepha inkomishi
Inqwaba emhlophe alahlwayo wholesale ukuphuza biodeg ...
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye kithi futhi sizothintana phakathi 24hours.